အိန္ဒြာ: 1/1/12 - 2/1/12
ရုန်းကန်ရှင်သန်နေသောအလှတရားနှင့် ရသအလင်း၏ ပွဲဦးထွက် အလှူ (NLD ပညာရေးရန်ပုံငွေ)
ရသအလင်း၏ ဇာဂနာ( ဒါရိုက်တာ မောင်သူရ) ဒါရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးတို့နဲ့ Surviving Beauty (ရုန်းကန်ရှင်သန်နေသော အလှတရား) ရုပ်ရှင်ပြပွဲနဲ့ အနုပညာ ဟောပြောပွဲလေးမှာ အားလုံးသိပြီးကြတဲ့ အတိုင်း အောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးမြောက်ခဲ့ပါပြီ။
ရသအလင်းအနေဖြင့် ဒီပွဲကို စတင်အကောင်အထည်ဖေါ်စဉ်က ကြော်ငြာထားရှိတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ရရှိလာသောအကျိုးအမြတ်ကို ရသအလင်း၏မူရင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည့် မြန်မာပြည်တွင်းမှ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပေါ်ဆေးကုသရန်လိုအပ်နေသော ကဗျာဆရာ၊စာရေးဆရာ၊ကာတွန်းဆရာများနှင့် အနုပညာကျေးဇူး၊စာပေကျေးဇူးကြီးမားသော ဆရာကြီး၊ဆရာမကြီးတို့ကို ဂုဏ်ပြုငွေအဖြစ် ချီးမြှင့်နိုင်ရန် အတွက်ရန်ပုံငွေအပြင် မြန်မာပြည်တွင်းရှိ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များသို့ ခွဲဝေလှူဒါန်းရန်ဖြစ်ပါသည်။
အခု ပထမဆုံးအနေနဲ့ (၂၂.၁.၂၀၁၂ ) တွင် ကိုဇာဂနာမှတဆင့် NLD ပညာရေး ၀န်ဆောင်မှုသို့ ငွေကျပ် ၁၀သိန်း (၁၀၀၀၀၀၀ိ) တိတိလှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ရဲရင့်ပို့ဆောင်ရေးမှ ကိုဇော်လေး၏ လှူဒါန်းငွေ စင်ကာပူဒေါ်လာ(၂၀၀)၊ ဇေယျာစားသောက်ဆိုင်မှ
ကိုတင်မောင်ဆွေ ၊ ကိုသက်နောင်တို့၏လှူဒါန်းငွေစင်ကာပူဒေါ်လာ(၅၀၀)တိတိကိုလည်း
ကိုဇာဂနာမှ NLD ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုသို့ ယနေ့ပေးအပ်လှူဒါန်းပြီးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
စုစုပေါင်း မြန်မာငွေ( ၁၄ သိန်း၊၂သောင်း ၇ ထောင်တိတိ)လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
ရုန်းကန်ရှင်သန်နေသောအလှတရားပွဲလေးကို လက်မှတ်တွေ ၀ယ်ယူခြင်းအားဖြင့် အလှူငွေတွေ ပါဝင်ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ကြသော လူကြီးမင်းများရဲ့ အလှူဒါနလည်းဖြစ်သည်မို့ သာဓုခေါ်မုဒိတာပွားများနိုင်ကြစေရန် သတင်းမျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။ ထို့အပြင် နောက်ဆက်ဆွဲ ဆက်လက်လှူဒါန်းဦးမည့် အလှူဒါနသတင်းများကိုလည်း ဖေါ်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြိုတင် သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
ရသအလင်းဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဌ ဥိးဘိုဘိုဝင်းမှ ဦးသူရ(ဇာဂနာ)သို့ တဆင့်လှူဒါန်းစဉ်
ဦးသူရမှ NLD ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုသို့
ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးစားအားထုတ်ပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကို လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်လျှက်
တစိမ့်စိမ့်တွေးပြီး တဖြည်းဖြည်းရွံရှာလာ ၊ မသဒီစိတ်များ တဝေါဝေါဆန်တက်လာ
စိတ်ထဲကနေ တစ်စစ်စစ်ယားယံလာ ၊ ဘာတွေများစွဲမြဲထင်ကျန်နေရစ်မလဲ
ဘယ်အရာတွေနဲ့ ထိစပ်ပတ်သတ်ခဲ့မလဲ ဘယ်လိုပိုးမွှားတွေများ တွယ်ငြိကပ်ပါလာမလဲ
သူ့မှာစွန်းထင်းပေရေနေတာ ချွေးစက်တွေမှ ဟုတ်ရဲ့လား. သူမှာ နံစော်နေတာ သမ္မာအာဇီဝမှဟုတ်ရဲ့လား
သူဘယ်ကနေ ရောက်လာသလဲ သူဘာတွေ ဖြတ်သန်းလာခဲ့လဲ သူ့သမိုင်းကြောင်းက ဘာတွေလဲ
သမ္မတရဲ့သက်တော်စောင့်ဆီကလား၊ ၀ါးဆစ်ဗုံသံလေးရှေ့က သတ္တုရောင် ပိန်ချိုင့်ချိုင့်ခွက်တစ်လုံးထဲကလား
ပင်စင်စားဆရာအိုကြီးရဲ့ခြံစောင့်ကြော်ငြာဆီကလား၊ ကဒါဖီရဲ့ ဘဏ္ဍာတော်တိုက်ဆီကလား
သူဟာ ကံကံ၏အကျိုးဆီကလား ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်ကျလား အလ္လာအရှင်မြတ်ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်လား
သူဘယ်ကနေလာသလဲ ၊ သူ နောက်ကြောင်းရှင်းရဲ့လား ၊ သူလိပ်ပြာလုံရဲ့လား ၊ သူ့မှာ စွဲထင်နေတာဘာနံ့လဲ
သူ စတိဖ်ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ပန်းသီးဆီကလာသလား ၊ လေဒီဂါဂါရဲ့ အတွင်းခံထဲက လာသလား
ရင်လတ်ရဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေဆီကလား ၊ ကင်ဂျုံအီရဲ့ အနုမြူဈေးကွက်ထဲကလား၊
သူဘယ်လောက်နွမ်းနယ်နေပြီလဲ သူဘယ်လောက်မှားယွင်းခဲ့ပြီးပြီလဲ သူဘာတွေလဲလှယ်ယူခဲ့လဲ
သူ့မာကျောမှုအဆင့်က ဘယ်လောက်လဲ သူဖောင်းပွမှုနှုန်းဟာ ဘယ်လောက်မြန်ဆန်လဲ
သူဟာ လောင်းကြေးလား သူဟာဒဏ်ကြေးလား သူဟာလာဘ်လာဘလား သူဟာအလျော်အစားလား သူဟာ အတိုးနှုန်းလား
သူ့အသားအရည်က ဘာရောင်လဲ သူဘာယောင်ဆောင်လာခဲ့တာလဲ ၊ သူဟာ ဘာသာစကားဘယ်နှစ်မျိုးလောက်တတ်သလဲ
သူ ဘယ်ကနေရောက်လာသလဲ ၊ G20 ရဲ့ လျို့ဝှက်အစည်းဝေးဆီကလား ၊ အသေခံဗုံးခွဲသမားရဲ့ သေတမ်းစာဆီကလား ၊
ဆောင်ကြာမြိုင်ထဲက ရယ်သံချွဲချွှဲတွေဆီကလား ၊ အထည်ချုပ်သမလေးရဲ့ နေ့ဖို့ညစာဆီကလား ၊
မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်တွေဆီကလား ၊ အခွန်တော်တွေဆီကလား၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေဆီကလား၊
ကရုဏာကြေးတွေဆီကလား တစ်ဖက်သတ်စာချုပ်တွေဆီကလား လူမှုထောက်ပံ့ရေး အသင်းအဖွဲ့တွေဆီကလား
ဘယ်ကလာသလဲ ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ ဘယ်အထိရောက်ခဲ့သလဲ ဘယ်လိုရှေ့ဆက်မလဲ သူ့မှာ စွဲထင်နေတာဘာတွေလဲ
တစိမ့်စိမ့်တွေးပြီး တဖြည်းဖြည်း ရွှံရှာလာ မသဒီစိတ်များဝေါဝေါဆန်တက်လာ နမ်းကြည့်ရင် ဘာနံ့ရနေလိမ့်မလဲ
စိတ်ကနေစပြီး ယားယံလာ ၊ လက်ဖ၀ါးတွေပါတစစ်စစ် ယားယံလာ ၊ တစ်ဘ၀လုံးလုံး အဆက်မပြတ် ယားယံလာ….
( 2012 ဇန်န၀ါရီထုတ် ပိတောက်ပွင့်သစ် မဂဇင်း)
ဇာဂနာနဲ့မင်းထင်ကိုကိုကြီးတို့ရဲ့ "Surviving Beauty"
"Surviving Beauty" ကို ရသအလင်း ဖောင်ဒေးရှင်းမှ စီစဉ်ကျင်းပပြီး ရရှိလာသော အကျိုးအမြတ်ပမာဏပေါ်မူတည်၍ မူရင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည့် ပြည်တွင်းရှိ ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်နေသော
မြန်မာပြည်တွင်းမှအမှန်တကယ်လိုအပ်နေသော နေရာများသို့ လက်ထိလက်ရောက် လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆက်တွဲ အလှူသတင်းများကို မီဒီယာများမှတဆင့် ရှင်လင်းတင်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း..
ဆိုတဲ့ ကြော်ငြာချက်နဲ့ ရသအလင်းက ပွဲလေးတစ်ပွဲစီစဉ်ကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်။
ဇန်န၀ါရီလ(၂၁)ရက်နေ့မှာ လူရွှင်တော်ဇာဂနာ(ဒါရိုက်တာ ကိုသူရ)နဲ့ ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးတို့ရဲ့ ရုန်းကန်ရှင်သန်နေသော အလှတရား (SURVIVING BEAUTY )ရုပ်ရှင်ပြပွဲနှင့် အနုပညာဟောပြောပွဲလေးကို အထက်ပါ ကြော်ငြာအတိုင်း စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာပွဲမှာ ဆုရခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်(၅)ကား၊ ဒါရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးရဲ့ အင်းသီးရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတို၊ နောက်ကြည့်မှန် အပိုင်းအစတွေကို ပြသမှာဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ ဘ၀ အနုပညာဖြတ်သန်းမှုတွေနဲ့ ကိုဇာဂနာကတော့ ဒါရိုက်တာမောင်သူရအဖြစ်နဲ့ရော လူရွှင်တော် ဇာဂနာအဖြစ်နဲ့ရော သူဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတာတဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံ ၊ သူ့စွမ်းဆောင်ဖန်တီးနေတဲ့အနုပညာအတွေ့အကြုံတွေကိုပရိတ်သတ်နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီး မေးခွန်းတွေ ဖြေရင်း ဟောပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရသအလင်းဟာ ကိုသူရတို့ စင်ကာပူကို ရောက်မယ့် ရက်ကိုသိရပြီး အချိန် နှစ်ပတ်လောက်အတောအတွင်းမှာ ဒီပွဲကို ရအောင်ဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့ အနေနဲ့ လက်မှတ်ကို ပိုက်ဆံပေးဝယ်ကြည့်ရတယ်သဘောမထားပဲ အလှူငွေထည့်ဝင်ခြင်းဖြင့် လက်မှတ်တစ်စောင်ရယူတယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားလေးနဲ့ လာရောက်အားပေးကြပါဦးလို့ ဖိတ်မန္တကပြုအပ်ပါတယ်။
လက်မှတ်နှုန်းထားတွေကတော့ $25 - $20 -$15 တို့ဖြစ်ပြီး၊ မနက်ဖန်(၇.၁.၂၀၁၂)နေ့မှစတင်ပြီး
Peninsular Plaza ရနံ့သစ်စားသောက်ဆိုင် B1-07 နဲ့ မြနန်းနွယ်02-41 တို့မှာ ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ် တွေကတော့
ကိုဘိုဘိုဝင်း( ရနံ့သစ်) ၈၁၆၁ ၂၂၄၄
ကိုဇော်ဝင်းလှိုင် ( မြနန်းနွယ်) ၉၆၆၉ ၃၀၃၉
မချစ်ကြည်အေး (၉၀၀၃ ၃၈၀၄)
မအိအိအေး( ၉၁၆၈ ၂၀၃၇ )
ဖိုးစိန်( ၉၀၆၂ ၃၂၃၉)
လက်မှတ်များကိုကြိုတင်မှာယူနိုင်ပြီး၊ကြားရက်တွေမှာ ညနေပိုင်း ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာတစ်နေကုန် အထက်ဖေါ်ပြပါနေရာတွေမှာ
ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကို မင်္ဂလာရှိတဲ့နှစ်သစ်၂၀၁၂ဖြစ်ပါစေလို့ ရသအလင်းအဖွဲ့သားတွေက ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။
ရသအလင်းအနေနဲ့ အောက်တိုဘာလမှာ ဆရာလှသန်းနဲ့ နိုဝင်ဘာအတွက် ဆရာအေးမင်းစောကို နှစ်ဦး ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ ဂုဏ်ပြုငွေကို ကဗျာဆရာကြီးမောင်အောင်ပွင့်ကို ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဆရာမောင်အောင်ပွင့်ဟာ ပြောင်မြောင်တောက်ပတဲ့ကဗျာဆရာကြီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အပြင်ကျန်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ခေတ်ကာလတွေမှာထောင်အကြိမ်တော်တော်များများ ကျခံခဲ့ရတဲ့ ကဗျာဆရာတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၆၇/၆၈ - ပုသိမ်ထောင် ၊ ၁၉၇၈/၈၀ - အင်းစိန်ထောင် ၊ ၁၉၉၇ - တံတားဦးအချုပ် ၊ ၁၉၉၉/၂၀၀၅ - အင်းစိန်/သာယာဝတီထောင် တဲ့။
ထောင်နံရံတွေဟာ ကဗျာတွေကို ကဗျာဆရာတွေကို ပိုမိုကျစ်လစ် ပြောင်မြောက် လာစေတတ်သလားမပြောတတ်တော့ပါ။
ဆရာက ၂၀၀၂ - လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့မှ Hellman/Hammett Grant for writers ဆုနဲ့
၂၀၀၄ - နိုင်ငံတကာသတင်းသမားများကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု ကော်မီတီမှ နိုင်ငံတကာစာတယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆု တို့ကရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာ့ကို ၁၉၄၅ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ(၁၁)ရက်နေ့ ပုသိမ်ခရိုင် သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ဘုရားကုန်းကျေးရွာဇာတိဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေကတော့ ဦးထွန်းမှိန် နဲ့ ဒေါ်စာမတို့ဖြစ်ပြီး ဆရာရဲ့နာမည်အရင်းကလည်း ဦးအောင်ပွင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၆၈ - အိုးဝေဂျာနယ်(၄)မှာကဗျာစတင်ဖော်ပြခံရခဲ့ရပြီး
၁၉၇၂ - မှာအလွမ်းပင်တော။(တကိုယ်တော်)
၁၉၇၄ - မိုးရိပ်လေရိပ် .မတ်လအရိပ်(လက်ရေးမှင်ကူး)
၁၉၉၅ - ကောင်းကင်တော်တမ်းခြင်း
၁၉၉၅ - ဧကစာမီးခိုးများ (ကိုသန်းထွန်း။ကေအေတီ။.အောင်ဘညိုတို့နှင့်)
ကျောင်းဆ၇ာ။စာပြင်ဆရာ။စာအုပ်ရောင်းသူ။AV MEDIA / PIONEER VIDEO PRODUCTION တို့တွင်စီစဉ်သူ..အနုပညာအကြံပေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၂ - ဇန်န၀ါရီတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးညစာ ကဗျာရှည်စာအုပ်ထွက်မည်။
(ဆရာ့ရဲ့ကိုယ်ရေး အကျဉ်းချုပ်ကို ကဗျာဆရာသော်ဇင်အုန်းက စုံစမ်းပေးပို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။)
ဆရာ့ကိုဂုဏ်ပြုငွေပေးအပ်ကြဖို့ ရသအလင်းအဖွဲ့သားတွေ အားလုံးတိုင်ပင် ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ အခါ ၊ အဆင်ပြေတိုက်ဆိုင်စွာပဲ စာရေးဆရာမ မနော်ဟရီက ပုသိမ်ကိုသွားမှာနဲ့ ကြုံကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ဆရာမောင်အောင်ပွင့်ကို ဂုဏ်ပြုငွေပေးအပ်ဖို့ ဆရာမ မနော်ဟရီက အစစအရာရာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ့အတွက် ဆရာမမနော်ဟရီကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း ရသအလင်းမှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ မှတ်တမ်းတင်ရှိပါတယ်။
ရသအလင်းရဲ့ ဆရာမောင်အောင်ပွင့်အတွက် ဂုဏ်ပြုလွှာ
ပြည်သူထဲက ကဗျာဆရာရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ
နွားတွေက သူ့ခြေရပေါ်နင်း၊ သူက နွားခြေရတွေပေါ်နင်း..နဲ့
ဆရာမောင်အောင်ပွင့်ရဲ့ မောင်အောင်ပွင့်မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ ဆောင်းပါရှည်ကိုလည်း တင်ပေးပါဦးမယ်။
( ဖေါ်ပြပါစာတမ်း ကဗျာနဲ့ ဖေါ်ပြမယ့်ဆောင်းပါကို ဆရာမ မနော်ဟရီက ကျေးဇူးပြူရှာဖွေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။)
မောင်အောင်ပွင့်ရဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက်တင်ကျန်ရစ်မယ့် ကဗျာရှည်တစ်ပုဒ်ကိုလည်း မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
မြစ်တွေစီးထွက်လာတဲ့ အကြောင်းဆိုတဲ့ ကဗျာကိုတော့ အိန္ဒြာ့ဘလောဂ့်မှာရော ဖဘမှာပါတင်ပေးထားဖူးပါတယ်။
ပြန်ဖတ်လိုသူတွေ ရှာဖတ်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒီပိုစ့်က တအားရှည်နေတဲ့ အတွက် ထပ်ထည့်မပေးတော့ပါဘူး။
"မဟာလူဆီသွားရာ ငဝန်မြစ်ရိုးက မမြင်နိုင်တဲ.တံတားများတဲ့"
ငြိမ်းချမ်းရေးကို အရူးအမူးဆာလောင်နေတဲ့ကဗျာဆရာရဲ့ ရေခဲမြေခံဟာ စစ်တလင်းပြင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အခါ.......
မဟာလူဆီသွားရာ ငဝန်မြစ်ရိုးက မမြင်နိုင်တဲ.တံတားများ
ငဝန်မြစ်မှာ နေလိုက် ဝေးကွာလိုက်
ဖရီးဒရစ်နီးရှရဲ. “ဒီလိုမိန်.ရဲ. ဇရထုသျှတြ” ကို ဖတ်မိ
အရှိကို အရှိအတိုင်းမြင်ပြီး အရှိငြိမ်းရေး
အရေးရေးတွေဘက် လှည်.ဖြစ်လှည်.အား မရှိအောင်ပဲ
ကိုယ်.ကိုယ်ကို စက်ဆုပ်ကြ ငဝန်မြစ်ဝှန်းသားတွေ။
ကိုယ်.ကိုယ်ကို စက်ဆုပ်ကြသူတွေ မများလို.လဲ
ဒီကဗျာရှည် ကျွန်တော် အခုရေးဖြစ်ပြီ။
ကျွန်တော် မြို.တော်ကြီး ခြေအချမိ
ဆရာကြီး အသက်ထင်ရှား မရှိတော.။
ငြိမ်းချမ်းရေးရှိရာ ငြိမ်းချမ်းရေးသာ သိတယ်
အမေတို.စာအုပ်တွေ ဖတ်မှတ်ခဲ.ရလို.လည်း ပါတယ်
“ပြည်သူချစ်သော အနုပညာသည်များ” စာအုပ်ထဲမှာ ပါတယ်။
ဆရာငြိမ်းမသေခင် မရွှင် မပျ မြင်ရတော.
ခင်ပွန်းသည်ရဲ.လက်ကို ကိုင်ထားရင်း အိပ်သတဲ.
နံနက် ၂ နာရီလောက်ကြီးမှာ
ခမျာ သိသိချင်းလိုက်ရင် မီချင်မီမှာ
ရင်ထဲမှာ တသသနဲ. တ,တ,နေမိရဲ.။
သားတို.ဆီ ပြန်မရောက် ခုအထိတိုင်ပြီ။
အမေ နောက်ဆုံး ပျောက်မသွားမီ
ဖိနပ်ဖြူဖြူ ခြေအိတ်ဖြူဖြူ အင်္ကျီဖြူဖြူ
အမေ ပြန်သွားမယ်လုပ်တော. ကျွန်တော် ငိုပါရော
ကုလား ဆရာမကြီးက ချော.တယ်အတန်းသားတွေနဲ. သီချင်းလိုက်အဆိုခိုင်းတယ်
တညည်းညည်းတညူညူ လူနာတွေကို တွေ.နေရတယ်
(အဲဒီလူတွေဟာ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ဆိုတာ နောင်မှ သိရတယ်)။
ကျွန်တော်တို. ညီအစ်ကို ပါသွားရော။
မုန်.လေပွေ မစားရက် ရှေ.မှာ ချထားကြ
တက်နင်းမိကြ မွမွကြေ လွင်.လွင်.ဝဲပေါ.။
“သေနပ်မှန် ဘုရား” တဲ.လေ။
ဗုံးကျင်းထဲကနေ သားလေးဆီ ပြန်ပြေး
ပုခက်အောက်မှာ သွေးတွေ အိုင်ထွန်း
အဲ.အဲ. အဲ.အဲ. တအဲ.အဲ.နဲ.
ဟိုဘက်ကမ်း ဒီဘက်ကမ်း နင်းလျှောက်လို.ရတယ်
ငဝန်မြစ်ခွဲ (ဒါးက) မြစ်ထဲမှာ ဖြစ်ခဲ.တယ်
၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ခဲ.တယ်
မကြာမကြာ အလောင်းတွေ ဝဲလည်ရင်
ဝဲထဲက တော်တော်နဲ. မထွက်
ဝါးလုံးရှည်နဲ. ထိုးလွှတ်လို.လည်း မထွက်
ရွာသားတွေ ကမ်းလုံးညွှတ် ကြည်.ကြ
ဘယ်ကလဲ၊ ဘယ်သူ.သားလဲ သမီးလဲ
ဘာကြောင်. သေရတာလဲ သူတို.မသိ
ကျားဆို မှောက်ခုံ၊ မဆို ပက်လက် မျောတတ်တာ
ဘာကြောင်.ရယ် ဘယ်.နှယ်ရယ်လို. သူတို.မသိ
နောက်ဆုံးတော. အလောင်းတွေသာ ဆက်မျောသွားတယ်
ဒေဝလို. အရှင်လို. ဘာကြောင်.မှ မခေါ်ချင်ဘူး
ကြောက်ဖို. နေနေသာသာ ဝေလာဝေးပေါ.။
အလုပ်ကောင်းတွေ လုပ်ရမယ် ကျွန်တော်ယုံတယ်။
ကိုယ်.ကိုယ်ကိုယ် စက်ဆုပ်သွားကြရော မဟုတ်လား
မဟာလူဆီ သွားရာတံတားများ မဟုတ်ချေဘူး။
ဘယ်လို ကုသိုလ်မျိုးပြုပြု စိတ်ဝမ်းကြည်နှုးဖြစ်ရတာ
တို. မြစ်ဝှမ်းသားတွေ ကိုယ်တိုင်နဲ. ဒီမြစ်ဝှမ်း
ဒီမြေရဲ. ကျေးဇူးတော်ပဲ မဟုတ်လား။
ငှက်တွေ ငါးတွေ ဘေးမဲ.လွှတ်ကြရင်
“နင်. အသက်တစ်ခါလွှတ်၊ ငါ.အသက် ဆယ်ခါလွှတ်” တဲ.
တို. မြစ်ဝှမ်းသားတွေရဲ. နှုတ်ဓလေ.
ဘယ်.နှယ်ဗျာ ဆယ်သက်တောင် မလွတ်လပ်ရမလား
မလွတ်လပ်လှ တစ်သက်အပြင် ရှိချင်သေးလို.လား။
အမေ.ဝမ်းကကျွတ်တဲ. ငါ၊ ငါ လုံးဝဖြစ်ရဲ.
ဝိညာဉ်အမည်နာမက ငါနဲ. ကပ်မြှောင်ပါလာတာ
ဒီတော. ငါနဲ.အတူ ချုပ်ငြိမ်းရမှာပါ။
ရွာ.နောက်တောထဲမှာ ပုန်းရင်း ဖွားမြင်တာတဲ.
သူနဲ.အတူ မွေး မွေးခါစလေးကို
ဒီတော. ရွှေငို အမည်တွင်ရောတဲ.
ကိုလိုနီခေတ်ထဲ အဘွား အပျိုဖြစ်
မင်းလောင်းမောင်သန်. မျှော်မိလို မျှော်မိ
“ဂျော.ဘုရင် ရွှေဘုန်း နေတနှုန်းသို. ပမာညီ” အစချီလို.
ဒီလိုနဲ. ဂျပန်ခေတ်နဲ. ကြုံဆုံရပြန်ရော
တစ်ကိုယ်လုံး ဝဲတွေ စွဲကြ
ဝဲနာတွေကို ဘီးစိပ်နဲ.တိုက် ဆားနဲ.ပွတ်
စပ်လွန်းလို. ထွန်.ထွန်.လူး မြစ်ထဲခုန်ချကြ
လွတ်လပ်ရေး ဒီဘက်ခေတ် ရောက်ပြန်တော.
ဒီလိုနဲ. မြန်မာ.ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ကို ရောက်
ဘာရယ်မှ မသိလိုတော.ပြီ ထင်ပါရဲ.
အဘွားရယ် သေငင်ဇောနဲ. မျောနေတုန်း
မွှတ်နေအောင် ကိုယ်ကိုလှည်. မူးသွားတာပဲ
စကြာပန်းရုံ လည်လည် လည်လည် မြင်ရဖူးပြီ။
ကျွန်တော်. စကြာပန်းရုံ ပျောက်ဆုံးခြင်း။
ရောက်အောင်တက်သွား၊ လကိုကိုင်ထိ ဖဲ.ကြည်.ချင်တယ်
ကျောင်းဆရာလေး သူဟာ အဖြူပါ
သူ.ခေတ်ကို သူထုဆစ် ရွာကချစ်သူပါ
“ဂွာရာနီကာ” ပန်းချီကား ခံစားတတ်လာတယ်
ပီကာဆိုရဲ. ချိုးဖြူ ကျူးရင်.ဟစ်ကြွေးသံ
ဆရာကြီး ဦးအုန်းလွင်ရဲ. ပန်းချီကား
ရေမြေနေလေ ဓာတ်ကြီး လေးပါး
ကိုယ်ကိုဘယ်လို ကျူံ.ပြီး ဘယ်လိုဝင်ရပါ.
“အင်ကွီဇီးရှင်း” အမှု ပြန်စစ်ရတယ်
ဂလီလီယိုနဲ. အေသင်တရားရုံး ဘယ်သူမှားခဲ.သတုန်း
နေကို ကမ္ဘာက လှည်.ပတ်နေမြဲနေမှာပါ”
နှုတ်ခြွေဖြစ်အောင် ခြွေသွား ဂလီလီယိုရဲ. စကား
တရားဓမ္မစစ် ခု အောင်ပွဲခံခဲ.ပြီ။
“အင်ကွီဇီးရှင်း” ကို သိရတယ်
ကျွန်တော် ထပ်မံယုံကြည်သထက် ယုံကြည်တယ်
မနက် ခရီးဝေး ထွက်ခွာရတော.မယ်.
ကောင်မလေးနဲ. ကောင်လေး ကျွန်တော်
မိခင်ဖခင်တွေ ပျောက် သားသမီးတွေပျောက်
“စောပု” ခေါင်းပြတ် ရွာထဲဖြတ်ယူ
မီးညှိထားတဲ. “ဘားမားစတိတ်” စီးကရက်
ဗုံးခွံခေါင်းလောင်းခေါက် ကျောင်း စ,ရောက်ခဲ.သူ
ဘုရားပန်း မညှိုး လွယ်တာ သိတယ် အေးတယ်
ဒီကျည်ပစ်ဖောက် လူဘယ်မျှ သေခဲ.ပြီလဲ
ရင်ထဲခံစား ဘုရားကျောင်းမှာ မမြင်ရဲ။
ဗုဒ္ဓရဲ. စကြာ၊ ဟစ်တလာရဲ. စကြာ
ညာလှည်. ဘယ်လှည်. မတူတဲ.အချက်
စကြာပုံ မြင်တိုင်း ရင်တုန်တတ်တာလည်း အခက်။
အင်္ဂလန်တိတ်ဆတ်ငြိမ်သက် ချက်စတာ အရပ်က
နဖူးမှာ အပြာရောင် အပေါက်ကြီးနဲ.
နောက်စေ. တစ်ခုလုံး ပွင်.ထွက်လို.
“ပထမရှီကာရီ” တပ်ဖွဲ.ဟာ သွေးနတ်ပူးဝင်
ရွာကို မီးတိုက်၊ ယောင်္ကျားမှန်သမျှ ပစ်သတ်
သူတို. စစ်ဗိုလ်သင်္ချိုင်းပေါ် ပုံထားလိုက်ကြတာ
အရပ်မြင်.မြင်. လူတစ်ဦးရဲ. မေးအထိ မြင်.သွားရော
သူတို. ကိုယ်တွေလက်တွေ ချင်းချင်းနီ
အနီးဝန်းကျင် မြက်ပင်တွေ နီမြန်းကုန်ပြီ
ဒေါသနဲ. နာကျင်တာတွေ ပေါ်လွင်
မမြင်တော.တဲ. မျကိစိတွေ ပြူးကျယ်နေ
ဓားနဲ. ဒေါင်းအလံနဲ.အတူ အောက်ဆုံးမှာ
“ခေါင်းတစ်ရာ သင်္ချိုင်း” ကဗျာထဲက ဖြစ်ရပ်တွေပါ
“ပေပင်မော်” ရွာမှာ ဖြစ်ခဲ.တယ်
သက်တမ်းနှစ်ပေါင်း ၁၅ သန်းကျော်ပြီ ဖြစ်တဲ.
ပြောစရာသမိုင်း အရိုင်းခေတ်တွေ ခေတ်တွေ။
တောင်တန်းတွေထက် လေးတဲ. ဦးနှောက်ပိုင်ရှင်
အမျိုးကောင်းသားတွေ မွေးဖွားပြီးရင်း မွေးဖွားရင်း
တငြိမ်.ငြိမ်. တသိမ်.သိမ်. စီးဆင်းပါတော. ငဝန်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကျွန်တော် ချစ်ခဲ.ပါတယ်။ ။
ရုန်းကန်ရှင်သန်နေသောအလှတရားနှင့် ရသအလင်း၏ ပွဲဦးထွ...
၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလအတွက် ကဗျာဆရာမောင်အောင်ပွင့်ကို ရသအလင...